Curashada Roobka Iyo Rajada Umadda | KEYDMEDIA ONLINE
Curashada Roobka Iyo Rajada Umadda
Abudlkarim Haji Seeko (Keydmedia) - Sanada is xigxiga Soomaaliya waxay marti u aheyd Abaar baahsan taasoo Dad iyo Duunyo si siman u saameysay, waxaana Abaarta ay sababtay in dad badan ay ka soo hayaamaan deegaanadii ay ku noolaayeen nus qarnigii la soo dhaafay.
Waxaa loo kala cararay wadmada Dariska ah iyo Caasimada Muqdisho, laakiin badanka dadka ma helin sooryadii ay filayeen waayo waxaa dhexda u galay Kooxo diirka Soomaali ka ah qalbiyadana Ajnabi ka ah kuwaasoo umada wixii loogu tala galay musuqmaasuqay.
Ciriiriga nolasha kama bixin Dadka, inkastoo gargaar uu soo gaaray Dalka isla markaana hey’ado boqolaal kor u dhaafaya ay yimaaden iyagoo waliba wada malaayiin Doolar oo loogu tala galay u gargaarida Umada Soomaaliyeed. Aaway Hey'adaha Gargaarkooda?
Dadka iyaga oo qoos iyo dhibaato tii ugu darneed ka joogo nolasha barakacnimo ee abaarta ay baday ayaa mar qura waxaa Gobalada iyo degmooyinka Dalka ee abaarta ay saameysay iyo kuwa loo soo badbaado tagay ku dhiftay roobab dad iyo duunyaba ay ku diirsadeen isla markaana raja galiyay Shacabka.
Curashada Roobka waxa ay sababtay in dad badan ay hamiyaan dib u laabasho iyo in nolashoodii hore ay dib u abaabulaan oo beerahooda ay tabcadaan, waxaana badanka Dadka ay yihiin iminka kuwa laabtay ama qaban qaabo ugu jira in ay dib u laabtaan.
Dadka Maxay u baahan yihiin?
Riyada iyo yididiilada Dadka dib u laabanaya ayaa ah in nolashooda ay dib isu soo kabi doonto isla markaana xaaladooda ay ku noqon doontoo halkii hore, laakiin si dariiqa rayidooda oo u noqdo mid dhab noqda wax ay u baahan yihiin taageero wajiya badan.
Hey’adaha ku mashquulsan quudinta iyo qeybta Raashiinka waxaa looga fadhiya in ay abuuraan Mashaariic maalgalin ah si Dadka ay u soo celiyaan wax soo saarkii beeraha oo muhiim u ahaa nolasha aadanaha.
Ka sakow Hey’adaha waxaa laga doonayaa ganacsatada iyo Dadka maalqabeenka ah ee awoodi kara in ay iyana taageeraan Shacabkan haminaya in waxsoosaarkii Beeraha ay dib u abaabulaan kadib curashada roobka oo nimcadii alle ah.
Sidoo kale waxaa maal galin u baahan xoola dhaqatada ay xoolahoodii ku dhamaadeen abaarta, kuwaasoo hadii aan loo helin mashaariic wax ku ool ah oo loogu daneynayo xaaladooda laga deyrinayo.
Ma ahan arin dhib badan hirgalinta howlahaasi baaxada leh, waayo waxay u baahan yihiin kaliya in la helo Dad daacad ah isla markaana u darban in umada ay wax u qabtaan isla markaaana dhiira galiyaan wax soo saarka Dalka.
Niyada Dadka Abaarta ay saameysay
Dadka abaarta ay saameysay ee iminka nimcada Roobka ku faraxsan niyadooda waxaa ka guuxaya iyagoo jooga beerahoodii ku dhex jira xoolahoodii hilmaamayna abaarta iyo musiibadeedii, taasi haday hirgashana waxaa la hubaa in wax badan ay isbadali doonaan.
Hadaba si riyada walaalhaasi looga dhabeeyo waxaa nala gudboon in aan si wada jir ah aayahooda uga fakarno isla markaana ugu istaagno dhiira galintooda iyada oo aan loo eegin deegaan, Qabiil IWM.
Hadaba Akhriste adiga wadadee is leedahay waa tan ugu macquulsan ee niyada Dadkaaasi dib loogu soo celin karaa si ay wax soo saarkoodii Beeraha iyo Xoola dhaqasada u soo ceshadaan? Fadlan Aragtidaada noogu soo dir Facebook.